Simplecast: Kwusaanụ pọdkastị gị n'ụzọ Easyzọ Dị Mfe | Martech Zone
Simplecast: Kwusaanụ pọdkastị gị nke Wayzọ Dị Mfe
Tọzdee, Machị 30, 2017 Fraịde, Machị 31, 2017 Douglas Karr
Dị ka ọtụtụ pọdkastị, anyị kwadoro pọdkastị anyị na Libsyn. Ọrụ a nwere plethora nke nhọrọ na njikọta nke na-akarị akarị ma na-emezigharị nke ukwuu. Anyị bụ ndị ọrụ aka, mana, enwere m obi ike na ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-enwe ihe isi ike na-ejuputa data niile dị mkpa naanị iji bipụta pọdkastị dị mfe.
Ọtụtụ mgbe, nyiwe nyiwe nwere nnabata di omimi miri emi ma dikwa oke nkpa na ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ ha bụ mkpebi dị oke egwu ma ọ bụ na-aga n'ihu na-egbu oge. Nke ahụ bụ ebe asọmpi ahụ ga-abata! Simplecast bụ mfe pọdkastị ebipụta n'elu ikpo okwu nke nwere ike ịkarị Libsyn na nyiwe ndị ọzọ.
Dị mfe nwere ihe dị mfe, mara ọrụ. Ọ na-enye ụzọ nke na-ebipụta pọdkastị ọhụrụ ma ọ bụ na-ebubata usoro gị ugbu a na-enweghị isi.
Ijuputa ihe pọdkastị gị dị mfe:
Na-enweghị mgbu Podcast Nyefee - Ntinye ma dị mfe 1-nzọụkwụ na-ebufe ma webata pọdkastị gị dị na Simplecast.
Unlimited Bandwidth & Nchekwa - Echegbula onwe gị banyere bandwidth na ụgwọ nchekwa, ọ gụnyere ya na ngwungwu Simplecast gị.
Embeddable Audio Player - Tinye ngwa egwu dị mfe maka pọdkastị gị ozugbo na weebụsaịtị gị, ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Onye na-ege ntị - Ngwa ngwa hu ihe na-ewu ewu, onye na-ege nti, na otu ha si a listeninga nti.
Otutu ndi njikwa - Kpọọ ndị ọzọ ka ha rụkọta ọrụ ma nyere aka jikwaa pọdkastị gị. Gịnị kpatara naanị ya?
Weebụsaịtị ndị ọbịa Mfe, kwadoro weebụsaịtị maka pọdkastị gị na nkwado maka ngalaba nke gị. Họrọ ndebiri ma ọ bụ chepụta nke gị.
Tags: pọdkastịpọdkastịebipụta Podcastdeputa pọdkastịmfe
Kedu ihe nhọrọ Facebook Ad Target?